Ị na-ụtọ nke misplacing gị android ekwentị? Atọpụ gị android ekwentị nwere ike ọ bụchaghị site-ezu ohi, na oge i nwere ike idejo ihe ya gburugburu ụlọ gị. Ọ pụrụ mmadụ na mberede dobe mgbe ị na-aga na-arụ ọrụ. Na omume ebe ọ bụla nke a ndapụta-eme gị na ị na-efu na ekwentị gị, ị ka nwere ike soro ya, ekele n'enweghị ike ọgwụgwụ-arụsi ọrụ ike technology innovators. Ị nwere ike ma soro na ekwentị gị site na iji ngwa ma ọ bụ na-enweghị ngwa. Enweghị na-eji nsuso ngwa ọdịnala i nwere ike iji Google si Android njikwa ngwaọrụ (ADM), Google Map ebe History na Google AirDroid. Ke ibuotikọ emi isi-elekwasị anya bụ nsuso Android ekwentị n'iji Android Ngwaọrụ Manager.
Mee Up Android Ngwaọrụ Manager Iji Sochie Ma ọ bụ Hichapụ ekwentị gị
Android Ngwaọrụ Manager bụ a Google akaụntụ ngwa na-ahapụ gị ahụ gị furu efu ekwentị mfe. Ọ na-enye gị ohere ehichapụkwa data gị furu efu ekwentị. Ị nwere ike ịnweta ADM ngwa online ma ọ bụ ibudata ya na a smartphone. Iji malite usoro nke nsuso ekwentị gị na bụla ikpe na ọ na-efu, ị kwesịrị ị na ibudata a Android Ngwaọrụ Manager ngwa si Google play ụlọ ahịa. Ọzọ dị oké mkpa ihe unu ga-nwere bụ gị Google akaụntụ log na nkọwa na ị na-eji mgbe mwube gị na ekwentị. Iji ADM i nwere ike remotely soro na ekwentị gị site na weebụ ma ọ bụ arụnyere ADM version. Mgbe ị na-ekpebi iji Android njikwa ngwaọrụ web dabeere na ebe a bụ ihe na-eme.
Nzọụkwụ 1. Chọọ maka Android Ngwaọrụ Manager version on a kọmputa nchọgharị.
Nzọụkwụ 2. Banyere na website eji gị furu efu ekwentị Google akaụntụ. Ọnọdụ nke ngwaọrụ gị ga-egosipụta na-enye gị na ezi anya. Ọ ga-egosipụta oge mgbe e ikpeazụ hụrụ na ụbọchị.
Nzọụkwụ 3. Site n'ebe ahụ i nwere ike mgbe ahụ họrọ ma na mgbanaka, mkpọchi ma ọ bụ ihichapu.
Dị ka e kwuru na mbụ ị nwekwara ike ibudata na Android Ngwaọrụ Manager ka a smartphone ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta a na kọmputa. Gaa Leta Google play ụlọ ahịa na ibudata ya a enyi android ekwentị ebe ekwentị gị na-efu. Si n'ebe-eso ndị a.
Nzọụkwụ 1. Tụgharịa na Android Ngwaọrụ Manager. Mgbe ọ bụla a na ngwa arụnyere na android ekwentị ya na-emekarị agbanyụrịrị ndabara. Ya mere, na-atụgharị gaa ekwentị Ntọala, enweta na Security mgbe ahụ Ngwaọrụ Administrators. Ị nwere ike ugbu gbanye Android njikwa ngwaọrụ site na-akanye na ya na N'ikpeazụ pịa Mee ọ rụọ ọrụ na akara ngosi
Nzọụkwụ 2. Ugbu a banye na ADM ngwa iji ekwentị gị Google akụkọ na Ọbịa mode.
Nzọụkwụ 3. Pịa na ebe icon n'akụkụ aka nri na-enwe ike na-ele gị furu efu ekwentị ọnọdụ.
A ngwa bụ bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị ite ke gị furu efu ekwentị n'iji Google akaụntụ, ma ọ ga-abaghị uru. Ugbu a na ị deere ọnọdụ nke gị furu efu ekwentị, ebe a bụ ihe ị chọrọ ime.
Gịnị na-eme mgbe ị na-efu na ekwentị gị.
Kpọọ ma ọ bụ ederede ekwentị gị
Ozugbo i deere na ọnọdụ nke gị furu efu ekwentị, ị nwere ike ma na-akpọ ma ọ bụ ịpị ya ma ọ ebe gburugburu ụlọ ahụ. Iji nweta a nhọrọ, pịa ebe button wee pịa na Ring na-akpọ ngwaọrụ gị. Ngwaọrụ ga iba n'olu dara ụda maka nkeji ise ọbụna ma ọ bụrụ na ekwentị gị bụ na a nkịtị mode. Ya mere ọ bụrụ furu n'ime ụlọ ị nwere ike na-enwe ike ịnụ ya. ADM ga gwa gị ma ọ bụrụ na ekwentị gị kụrụ ma ọ bụ.
Remotely soro na ehichapụkwa ekwentị gị.
Ọ bụrụ na gị na ekwentị nwere mkpa na mwute ozi dị ka akụ nkọwa, ọ dị mkpa ihichapu ha nke mere na onye na-okụt ekwentị gị nwere ike ọ gaghị chọta ma ọ bụ jiri ha. Ya mere mkpa ka ị ehichapụkwa site n'ịrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta. Mgbe n'ịkpọ ekwentị gị ngwa pịa mkpọchi na Ihichapu bọtịnụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa ihichapu na akara ngosi na mgbe ahụ gosi na edinam. All ọdịnaya ga-kpochapụrụ na furu efu ekwentị. Ị ga-enweta a ngosi na akaụntụ email gị na-agwa gị nke a edinam.
Deactivate ekwentị gị na wireless na-eweta.
I nwekwara ike igbachi gị furu efu smartphone si n'enweghị ikike onye na-eji ya. Ọ ga-egbochi niile olu oku na akụkụ. Na Android Ngwaọrụ Manager na ị nwere nhọrọ nke kpochidoro esoro ekwentị.
Pịa na mkpọchi akara ngosi. Ị ga-kpaliri ịbanye nọmba ekwentị na ọ ga-eji iji kpọtụrụ gị.
Mepụta okwuntughe igbachi ekwentị gị na ndị ọzọ karịa paswọọdụ nke Google akaụntụ. Mgbe ị na-akpatre pịa The mkpọchi button nọmba ga-egosipụta na ihuenyo gị furu efu ekwentị. Ya mere, mgbe o okụt ekwentị gị ọ ga-akpọtụrụ na nọmba aga egosipụta na ihuenyo.
-Agwa gị ndị enyi na ezinụlọ nke na-ezu ohi.
N'ikpeazụ, i mkpa gwa enyi gị na banyere ekwentị gị mgbake. Ha ga-inyere gị aka na-ewepụta na ekwentị gị site na mata ọnọdụ. Ihe atụ ọ bụrụ na ọ bụ ebe gburugburu backyard, ha nwere ike na-aga gburugburu yad dị ka ị iba ekwentị. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ime ụlọ ma ọ bụ eleghị anya, onye were ya na ị nwere ike agwa ndị nche pesonel.
Iji Android Ngwaọrụ ufene bụ mfe na-ezi ezi. Otú ọ dị, furu efu ekwentị kwesịrị-arụsi ọrụ ike Simcard na ike-enwe ike ịnweta Internet.
> Resource> ihichapu> Olee otú Iji Sochie na Hichapụ Your Android ekwentị enweghị Ndepụta égwu